के बाघहरू मान्छे खोज्दै आक्रमण गर्छन् ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
के बाघहरू मान्छे खोज्दै आक्रमण गर्छन् ?
आफ्ना लागि विचरणको निश्चित क्षेत्र तोक्ने बाघहरू चितुवा जसरी मान्छेका घरघर बसेर आक्रमण गरेका घटना छैनन् । आहारा नजिक पुगेका, आफूलाई बाधा पुर्‍याएका र अशक्त भएर आहारा प्रजाति सिकार गर्न नसकेका बेला भने बाघले कसैलाई बाँकी राख्दैन ।
आश्विन १८, २०७७ गोविन्द पोखरेल
काठमाडौँ — कसैले ‘बाघले मान्छे भेट्टायो भने खाइहाल्छ नि’ भन्दा हामी सामान्य रूपमा लिन्छौं । वास्तविकता भने केही फरक छ । मान्छे बाघको आहारा प्रजाति होइन । बाघले विरलै मात्र मान्छेको सिकार गर्छ । बाघलाई मान्छे खान बाध्य बनाउनेचाहिँ मान्छे स्वयं नै हो । बाघले गाउँघरमै आएर मानिसलाई आक्रमण गरेका घटना निकै न्यून छन् । जति गरेको छ जंगलभित्रै ।
गत सोमबार हात्तीलाई घाँस काट्न जंगल गएका रत्ननगर–६ बछौलीका बभना चौधरीले बाघको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाए । चितवन निकुञ्जका अनुसार मारेर ल्याएको चित्तल बाघले खान लाग्दा चौधरी नजिक पुगेका थिए । बाघले रिसाएर आक्रमण गर्दा चौधरी मारिएका हुन् । यसअघि असोज १० मा भरतपुर–१३ पटिहानीका जन्छु महतोलाई मार्ने बाघ बूढो, घाइते र अशक्त भएको चितवन निकुञ्जले जनाएको छ ।
बाघ कति बेला नरभक्षी हुन्छ ? अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार जब बूढो हुन्छ, सिकार गर्न सक्दैन, घाइते हुन्छ वा मानिसले आएर उसलाई बाधा पार्छ, ऊ आक्रामक हुन्छ । गत मंगलबार रौतहटको चन्द्रपुर–६ का २७ वर्षीय संगम भण्डारी बाघको आक्रमणमा मारिए । नेपालमा हालसम्म देखिँदै आएका घटनामध्ये यो अलि फरक थियो । डाले घाँस काट्न जाँदा वनभित्रै हराएका भण्डारीलाई भोलिपल्ट गाउँलेहरू जब खोज्न निस्किए, पत्ता लाग्यो बाघले मारेर आधै खाइसकेको थियो ।
रौतहटको घना वन क्षेत्रमा देखिएको यो बाघका बारेमा नेपालका अध्ययनकर्ताहरू विगतको ट्र्याक रेकर्ड नभएको बताइरहेका छन् । जैविक विविधतामाथि अनुसन्धान गर्दै आएका रिसोर्स हिमालय फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यक्रम अधिकृत डा. दिनेश न्यौपाने बाघको बासस्थान कम हुँदा र सीमित क्षेत्रभित्र साँघुरिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदा यस्ता घटना बढेको बताउँछन् । ‘क्षेत्र निर्धारण गरेर बस्ने प्रजाति भएकोले निकुञ्जको एउटै भेगमा साँघुरिएर बस्नुपर्दा बाघ आहाराको खोजी गर्ने क्रममा मध्यवर्ती वनसम्म पुग्छन्,’ उनले भने, ‘यही कारणले उनीहरूको मानिससँग जम्काभेट हुन्छ अनि आक्रमण गर्छन् ।’
चितवन निकुञ्जमा बाघले धान्न सक्ने अध्ययन भएको छ । ‘निकुञ्जले १ सय ३६ वटासम्म बाघ थेग्न सक्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सीमित क्षेत्रमा हुँदा उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्छ । आहारा नभेटेपछि उनीहरू मध्यवर्ती जंगल आसपास पुग्दा द्वन्द्व बढेको हो ।’ सन् २०१३ मा १ सय २० वटा बाघ भएको चितवन निकुञ्जमा २०१८ को गणनामा ९३ वटा मात्रै रहेको पाइएको थियो ।
बाघमा विधावारिधि गरेका सदर चिडियाखानाका प्रमुख चिरञ्जीवी पोखरेल मुख्यतः विचरण क्षेत्र, आहार प्रजाति र उमेरका कारणले बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्ने बताउँछन् । ‘बाघ क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रजाति हो, टेरिटोरीलाई लिएर बाघहरूबीच लडाइँ हुँदा बस्ती नजिकैको जंगलमा पुग्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अर्को कारण भनेको बूढो हुँदै जाँदा सिकार गर्ने बल घट्छ, जे सजिलै भेटिन्छ त्यो मार्छन् ।’ आफू बस्ने क्षेत्रमा आहार प्रजातिका वन्यजन्तु घटेपछि भोकाएर बाघ बाहिर निस्कने उनले बताए । ‘मान्छेलाई आक्रमण गरेर स्वाद लिएको बाघले फेरि पनि आक्रमण गर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका प्रवक्ता हरिभद्र आचार्य मानव–बाघ द्वन्द्व बढ्नुमा मानिसकै कारण औंल्याउँछन् । ‘द्वन्द्व बढ्नुमा एउटै कारण हो, स्रोतको उपभोग अर्थात् जंगल,’ उनले भने, ‘बाघको बासस्थानमा मानिसले उपयोग गर्न खोजेपछि द्वन्द्व बढेको छ ।’ बाघले डमरु हुर्काएपछि त्यसलाई चाहिने बासस्थान तथा क्षेत्र निर्धारणका क्रममा गाउँ नजिकैका जंगलसम्म पुग्ने भएकाले पनि द्वन्द्व बढेको उनले बताए । द्वन्द्व कम गराउनका लागि बासस्थान सुधार गर्दै आहारा प्रजाति बढाउने र पानीको स्रोत व्यवस्थापनका कार्यहरू विभागले गरिरहेको उनले बताए ।
यो द्वन्द्व न्यूनीकरणका उत्तम उपाय भनेकै जनचेतना रहेको उनले बताए । मानिसद्वारा सिर्जित समस्या भएकाले मानिसले नै हल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । बाघले कतिबेला कुन समयमा सक्रिय हुने आक्रमण गर्न सक्ने जस्ता अध्ययन तथा जानकारी बफर क्षेत्रका मानिसहरूलाई दिन सके यसले द्वन्द्व घटाउन सक्ने पोखरेलले बताए ।
चम्पावत बघिनी जसले ४३६ जनालाई खाई
ब्रिटिसकालीन भारतीय कर्णेल जिम कोर्बेटले मानिस खाने सयौं बाघलाई मारे । कुमाउ–गढवाल क्षेत्रमा सन् १९०७ देखि १९३८ सम्म मान्छे खाने धेरै बाघ उनले मारे । सन् १९४४ मा उनको ‘मेन इटर्स अफ कुमाउँ’ पुस्तक प्रकाशित भएको थियो । उत्तर प्रदेशका करिब एक दर्जन मानिस खाने बाघको सिकार घटनासँग समावेश उनको उक्त किताबमा नेपालमा जन्मिएर भारतको चम्पावतमा आतंक मच्चाएकी ‘चम्पावत बघिनी’ को घटना पनि समावेश छ ।
नेपालका करिब २ सय कृषकहरूलाई मारेपछि यो बघिनीलाई सन् १९०० को सुरुतिर भारततर्फ लेखेटिएको थियो । कुमाउमा बस्न थालेपछि यसले चम्पावतका गाउँलेलाई मारेको थियो । सन् १९०७ मा कोर्बेटलाई यसको आतंक रोक्नका लागि मार्ने जिम्मा दिइयो । कोर्बेटले करिब ४ वर्ष लगाएर गाउँलेको सहयोगमा यसलाई मारे । उनले यो बघिनीलाई ३ पटक गोली हानेर मारेका थिए ।
मारिसकेपछि कार्बोटले बघिनीको शरीर हेर्दा थाहा पाए कि ऊ कुनै बेला मानिसबाटै आक्रमणमा परेकी थिई । बघिनीको थुतुनोमा गोली लागेको पुरानो घाउ थियो । घाइते भएकाले अन्य जीव तथा आफ्नो प्राकृतिक आहारालाई आक्रमण गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सहज हुने मानिसलाई आक्रमण गर्न थालेको खुलेको थियो । संरक्षणकर्मी हेमन्त मिश्रद्वारा लिखित ‘बोन्स अफ द टाइगर : अफ मेन इटिङ टाइगर्स एन्ड टाइगर इटिङ मेन’ पनि यो घटनाबारे चर्चा गरिएको छ । यो बघिनीले ४ सय ३६ जनालाई खाएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
चम्पावत बघिनीपछि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा ८६ वर्षपछि अर्को खतरनाक नरभक्षी बाघ देखा पर्‍यो । त्यो बाघकाे नाम ‘बैतडी मेन इटर’ दिइएको थियो । यो घटना पनि चम्पावतसँगै केही मिल्छ । यो भाले बाघले सन् १९९७ मा बैतडीका विभिन्न १० वटा गाउँमा १० महिनाको अवधिमा सय जनाभन्दा बढीलाई मारेको थियो । मारिनेमा अधिकांश बालबालिका रहेको मिश्रको पुस्तकमा उल्लेख छ । बैतडीको उक्त हिंस्रक बाघलाई तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा गोली हानेर मारियो । मान्छे खानुअघि यो बाघ मानिसहरूबाटै आक्रमणमा परी घाइते पारिएको थियो ।
बाघ-मानवद्वन्द्वका लामो श्रृंखला
प्रकृतिविद् माइकल ब्राइटको ‘मेन इटर्स’ पुस्तकमा दक्षिण एसियामा विगत चार सय वर्षको समयमा १० लाख मानिसहरू बाघको आक्रमणमा परी मरेको उल्लेख छ । सन् १९२२ मा बाघको आक्रमणमा परी दक्षिण एसियामा १६०० जना मानिसहरूको ज्यान गएको थियो । भारतको मुम्बईमा सन् १८२२ मा बाघको आक्रमणमा परी ५ सय जनाले ज्यान गुमाएको पुस्तकहरूमा उल्लेख छन् ।
भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन सुरु भएयता मलायाको जंगल फँडानी सुरु भयो । मानिसहरूका बस्ती विस्तार हुन थाले । बासस्थान विनाश हुँदै गएपछि बाघको आक्रमण पनि बढ्न थाल्यो । सन् १८४० मा बाघको आक्रमण परी वार्षिक २ सयदेखि ३ सय मानिसहरू मारिएको मिश्रले विभिन्न स्रोतलाई उल्लेख गर्दै आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । मानिसमाथि दिनहुँ आक्रमण बढेपछि पासो थापेर र गोली हानेर बाघ मार्न थालियो । पछि सन् १९३० को दशकमा सिंगापुरबाट बाघ लोप भइसकेको थियो ।
नेपालमा पनि बाघ मार्ने र बाघबाट मारिने घटनाहरू धेरै छन् । सन् २००८ मा बायोलोजिकल जर्नलमा प्रकाशित भीम गुरुङको अनुसन्धानात्मक आलेखअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १९७९ देखि २००६ सम्म ८८ जना मानिसहरूले बाघको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका छन् । उनीहरूलाई ३६ वटा बाघले आक्रमण गरेको थियो ।
मारिने अधिकांश मानिसहरू मध्यवर्ती क्षेत्रको एक किलोमिटरभित्रका जंगलमा घटनाहरू भएका थिए । १९९४ देखि २००७ सम्म बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२ जना मानिस बाघद्वारा मारिएका र ४ जना घाइते भएका थिए । युरोपियन जर्नलमा अफ वाइल्ड लाइफ रिसर्चमा सन् २०१९ मा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार बर्दिया र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् १९७९ देखियता ३४ वटा बाघ मान्छेसँगको द्वन्द्वका कारण मारिएका छन् ।
प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ १४:१३
बागलुङ–पर्वत जोड्ने झोलुंगे पुलमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल
आश्विन १८, २०७७ प्रकाश बराल
बागलुङ — निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बागलुङ–पर्वत जोड्ने झोलुंगे पुलमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । लकडाउनको समयमा निर्माण सम्पन्न भएको पुल तत्काललाई सर्वसाधारणका लागि खुला थिएन ।
लकडाउन आंशिक खुला भए पनि बागलुङमा भदौभर निषेधाज्ञा थियो । तर, असोज १ बाट सार्वजनिक यातायात पनि खुला भएपछि यो पुलमा पर्यटक बढेका छन् ।
बागलुङ नगरपालिकाको रामरेखादेखि छिमेकी पर्वत जिल्लाको पाङ जोड्ने यो पुल ५ सय ६७ मिटर लामो छ । यो सिंगल स्पाम पुल कालिगण्डकी नदीदेखि १ सय ६५ मिटर उचाइमा बनेको छ । बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले संसारमै यति लामो झोलुंगे पुल अन्त नभएको बताए । यो पुलले डेढ घण्टाको बाटोलाई १० मिनेटमा छोट्ट्याइदिएको छ । ‘हामीले संसारकै लामो झोलुंगे पुल भनेका छौं, गिनिज बुकमा नाम लेखाउन पहल भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘सामान्य विधिबाट नभएपछि चीनबाट ल्याएका मेसिनले पुलको लट्ठा तानेर बनायौं ।’
१० करोड लागतको यो पुल थानी, बिएलटी, हिमशिखर संयुक्त निर्माण कम्पनीले बनाएको हो । यो पुलबाट धौलागिरि हिमाल, कालीगण्डकी नदी, पोखरा–बागलुङ तथा मालढुगा–बेनी सडकको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । पूर्वदक्षिणमा बागलुङ कालिका मन्दिर छ । पुल हेर्न विभिन्न जिल्लाबाट पर्यटक आउन थालेका हुन् ।
प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ १३:५४